အဆိုပါ 25 အများစုမျှော်လင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016 - သတင်း Rule
အဆိုပါ 25 အများစုမျှော်လင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016
စွန့်ပစ်အာကာသဘူတာကနေမူးယစ်ဆေးလောင်စာ dystopias မှ, ဒီမှာပါ 25 အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့် 2016 ဂိမ်းတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်နှစ်ဖြစ်သွား
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 25 အများစုမျှော်လင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း 2016 - မထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကား 2, Uncharted 4, XCOM2နှင့်ပိုပြီး” Keith စတူးဝပ်နှင့်ကိတ် Gray ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 30 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 11.52 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ဒါပေါ့, ဂိမ်းကစားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်မျှော်လင့်နှင့်ပြည့်စုံနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသို့သွား. ဤသည်နှေးကွေးမီးလောင်ဖောင်းပွအပေါ်ဆိုရမှာပါတဲ့အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါသည်, ပင်သေးငယ်တဲ့ Indie စီမံကိန်းများကိုအတိုးဆိုပါသည်မှကြော်ငြာအတိုရိုက်ချက်များနှင့် YouTube trailers လ အသုံးပြု. နှင့်အတူ. သတင်းကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, များသောအားဖြင့်လုံလောက်တဲ့တောက်ပရှိပါတယ်, ကစိတ်အားထက်သန်မှုကိုအပြစ်လွတ်စေဆန်းသစ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုခ - နှင့် 2016 အဘယ်သူမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ကြည့်.
သငျသညျမှုကြောင့်ယခုနှစ်ထွက်ရှိသမျှကို grandiose နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတွေကိုရိုက်ကူးနှင့် Blockbuster franchises နှင့်အတူတစ်ဒါဇင် '' အများဆုံးမျှော်လင့် '' စာရင်းဖြည့်နိုင်ပေမယ့်, သေးငယ်တဲ့စကေးလွတ်လပ်သောစီမံကိန်းများကိုများစွာလည်းရှိပါတယ်, ဗီဒီယိုဂိမ်းယဉ်ကျေးမှုကိုရိုက်နှက်၏ idiosyncratic နှင့်စမ်းသပ်ဆဲနှလုံးစောင့်ရှောက်ခြင်း.
ဒီမှာ, ထိုအခါ, အကြီးမားဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးသည်, ကြွလာအတွက်အဘို့အထွက်ကြည့်ဖို့အသေးဆုံးနှင့် strangest ခေါင်းစဉ် 12 လများ.
Astroneer (PC ကွန်ပျူတာ)
ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ယဉ် ... Aston. ဓါတ်ပုံ: system ကိုခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်
အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းဤသည်နေ့ရက်ကာလဂြိုလ်သကဲ့သို့ပေါများနေကြသည်, ဒါပေမဲ့ဆီယက်တဲလ်စတူဒီယို System ကိုခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်မှဒီတစ်ခု, တစ်ဦးအမှန်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ယဉ်ပေါင်းစပ်တူ Kerbal အာကာသအစီအစဉ် နှင့် အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky. လုပျထုံးလုပျနညျးထုတ်လုပ်ပြီးကမ္ဘာ Explore နဲ့ပျော်စရာအဘို့ထိုသူတို့ terraform (နှင့်အမြတ်အစွန်း).
Block'Hood (PC ကွန်ပျူတာ)
တစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိပြုမိ Sim City ကို ... Block'Hood.
အမြို့မြို့: Skyline ပြီးခဲ့သည့်နှစ် breakout မြို့ပြဆောက်လုပ်ရေး sim ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်အတွက် 2016, ကအားလုံးကို Block'Hood အကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ၎င်း၏ဖန်ဆင်းရှင်အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့, ဗိသုကာနှင့်ဂိမ်း developer များဟိုဆေး Sanchez, တစ်ရပ်ကွက်အဆောက်အဦဂိမ်းအဖြစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပို modular င်, ထို Sim City, အယူအဆအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သတိထားယူ, ကစားသမားသေးငယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ, ကချိန်ခွင်လျှာသဘာဝနှင့်သာယာအဆင်ပြေမှုများ Self-ပါရှိသောနေရာများ. ကြည့်ဖို့လှပသောဒါဟာင်, လွန်း.
ဖြိုခွင်း3(Xbox One မှာ)
လုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ... ကိုအရေးယူ 3. ဓါတ်ပုံ: Microsoft က
အဆိုပါဂန္ sandbox 'သေနတ်သမား Dave ဂျုံးစ်၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာပြန်သွားဖို့သတ်မှတ်, Grand Theft Auto ၏ DMA ဒီဇိုင်းတည်ထောင်သူနှင့်ဖခင်. အခုအချိန်မှာကြီးတွေရောင်းလုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဘို့အခွင့်ပြုရန် cloud computing ၏ဂိမ်းရဲ့အသုံးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဖြစ်သွားမယ့် ကြီးမားသော YouTubers ကိုနှင့်အတူ.
မထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကား2(PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို, Xbox One မှာ)
အမ်မလီ Kaldwin ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း ... မထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကား 2. ဓါတ်ပုံ: Bethesda
Arkane Studio ကရဲ့ steampunk ကိုယ်ပျောက်စွန့်စားမှုများ၏ပြန်လာအသစ်တစ်ခုကိုခဲဇာတ်ကောင်တတ်၏, အမ်မလီ Kaldwin, နှင့်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သောအဆင့်မြှင့်တင်မှုစနစ်. ဒါဟာအစဖှယျကျော်လွန်ကျွန်တော်တို့ကိုယူကတိပြု, Dunwall ၏ဘေးဥပဒ်-စီးမြို့, လေ့လာသင်ယူနှင့်သွားလာရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလိုသင့်သော. (ထုတ်ဖော်: ဂါးဒီးယန်းပံ့ပိုး Cara Ellison ဂိမ်းအပေါ်တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းဒီဇိုင်နာဖြစ်ပါတယ်။)
အလွသားရဲ (iOS ကို)
တိရိစ္ဆာန်မှော် ... အလွသားရဲ. ဓါတ်ပုံ: ပညာရှိတ္တု
အကောင်းဆုံးတစ်ဦးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ခြင်း simulation အကြားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်အဖြစ်ဖော်ပြ, တစ်ဦးကို virtual အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် Jenga, အလွသားရဲနှင့်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် tablet ကိုအပေါ်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ virtual world အတည်တစ် RFID-powered plinth အပေါ်မော်ဒယ်တိရိစ္ဆာန်များသီးနှံများကိုပုံမှသင်ရရှိသွားတဲ့. သင်ဖန်တီးကမ္ဘာကြီးပိုပြီးအလွဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပိုမိုတိရစ္ဆာန်လုပ်ကွက်. ရေးသားသူစဉ်းစားဉာဏ်ရှိ Object ကိုအောင်မြင်စွာတစ်လျှောက်လုံးပွဲတော်များတစ်စီးရီးမှာသူ့ရဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ဂိမ်း demoed 2015 ဇန်နဝါရီရဲ့အဆုံးမှာတစ် Kickstarter ကကင်ပိန်းဖွင့်သည်.
အရုပ်အိမ်များလှုပ်ရှားမှုက Man နှင့်တွေ့ဆုံ ... မီးသတ်အထိမ်းအမှတ်တွေကိုကံကြမ္မာ. ဓါတ်ပုံ: ကို Nintendo
ယဉျကြေးမှုအခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်း၏မီးသတ်အထိမ်းအမှတ်တွေကိုစီးရီးသင်သည်သင်၏တပ်များနှင့်အတူရုပ်သေးမာစတာကစားရန်ခွင့်ပြု, နှစ်ဦးစလုံးသည်စစ်တိုက်နည်းဗျူဟာသို့သူတို့ကိုငါ corralling - နှင့်လည်းသူတို့ကိုနမ်းအောင်. ဒါဟာအရုပ်အိမ်များတူလှုပ်ရှားမှုက Man နှင့်တွေ့ဆုံင်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ကူးယဉ်၏အဆုံးစွန်ပေါင်းစပ်. နောက်ဆုံးအရစ်ကျနှစ်ခုဗားရှင်းသို့ခွဲထွက်သည်, တူညီတဲ့မော်ကွန်းစစ်၌သင်တို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတပ်မတော်ကိုထိန်းချုပ်ပေးခြင်းအသီးအသီး. ထိုသို့သင်အမှန်တကယ်တစ်ဦးထူးစာဖြင့်ရေးသားဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူလူနေထူထပ်တဲ့တယ်သောသရုပ်ဖော်ကမ္ဘာကတိပေးထား, တကယ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့အတင်းချင်. တစ်ဦးအတွက် … ကောင်းတဲ့လမ်း?
Firewatch (မက်, PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို)
firewatch ဓါတ်ပုံ: Campos စန်တို
Wyoming တစ်ကျယ်ပြန့်ကျေးလက်ဒေသရှိ Set, ဤပထမပုဂ္ဂိုလ်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေစွန့်စားမှုတစ်ဝေးလံခေါင်သီလက်ပတ်နာရီမျှော်စင်အတွက်ကစားသမားတတ်၏, သစ်တောမီးလောင်မှုထွက်သည်ရှာဖွေနေ. ထိုအခါမူကားလိုက်တယ်အမှုအရာဖြစ်ပျက်စတင်ပြင်ပကမ္ဘာရန်သင့်သာ link ကိုသင်သို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါစေခြင်းငှါတစ် walkie Talkie အတိုင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်စကားသံပေ. ရေးသားသူ Campos စန်တို Jake Rodkin နဲ့ Sean Vanaman ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်, ယခင်ကတွေ့ခဲ့ရဘူးရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လမ်းလျှောက်သေဂိမ်းများကိုကြီးကြပ်သူကို, ဒါကြောင့် creepy လေထု၏ပဒေသာမျှော်လင့်ထား.
Glitchspace (PC ကွန်ပျူတာ)
စတိုင် coding ... Glitchspace. ဓါတ်ပုံ: အာကာသ Budgie
ဂိမ်းတစ်ခုမှတဆင့် coding ၏အခြေခံမူသင်ပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားမှုရှိခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့ဒီအရှိဆုံးစစ်မှန်စွာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတစျဦးဖွစျသညျ. လွတ်လပ်သောအသင်းအာကာသ Budgie အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး, Glitchspace သငျသညျကိုထိရောက်စွာအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်တိုးရန်သင့်အားလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကို reprogram ရသောတစ်ဦးပထမဦးဆုံး-လူတစ်ဦး platform တစ်ခုဖြစ်သည်. အဆိုပါစတိုင်, အနည်းဆုံးပုံရိပ်ယောင်ဆိုက်ဘာစပေ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုစီသည်ကျနော်တို့ GameCity မှာကစားသည့်ဒီမိုကနေ 2013, တကယ့်သင်တစ်ဦးဝိဉာဉ်များကဲ့သို့ထင်အောင်ပါဘူး.
မူလစာမျက်နှာအခမဲ့ (မက်, PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို)
တိရိစ္ဆာန်စွန့်စားမှု ... မူလစာမျက်နှာအခမဲ့. ဓါတ်ပုံ: ကီဗင် Cancienne
ယခင်ကစမ်းသပ်နယူးယောက်စတူဒီယိုဧရိယာ / ကုဒ်တွေနဲ့, ဒီဇိုင်နာကီဗင် Cancienne သင်တစ်ဦးဖောက် mutt နေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မွို့၌ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်တစ်ဦးတည်းဆော့ကစားရာအရပ်, ဒီခွေးတစ်ကောင်ခြင်း simulation ဖွံ့ဖြိုးဆဲပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကြာအောင်ထားပြီး. အလားတူအစွန်းရောက်ထိခိုက်ရန်, တိုကျို Jungle, သငျသညျရှင်သန်ရန်သင့်တိရိစ္ဆာန်ဗီဇအတိုင်းကိုအသုံးဖို့ရှိသည်, အစားအစာကိုရှာဖွေ, နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်အဖော်. အောင်မြင်တဲ့ Kickstarter ကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ခွေးချစ်သူများ၏ရှင်းလင်းသောတွေအများကြီးဖွင့်ကမ္ဘာကစွန့်စားမှုပေါ်မှာဤအသစ်အ slant အတွက်ရွေ့လျားတစ်ခုခုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုမြင်ရမယ့်.
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း: သုည Dawn (PS4 ကို)
စက်ရုပ်များနှင့်ဒိုင်နိုဆော - တူသောအဘယ်သို့မဟုတ်ဘူး? မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း: သုည Dawn ဓါတ်ပုံ: Sony က Computer ကို Entertainment က
သငျသညျအမြိုးမြိုးအမ်စတာဒမ်အခြေစိုက် PlayStation ဝါရင့်ပြောက်ကျားအားကစားပြိုင်ပွဲထံမှဤ action အခန်းကဏ္ဍ-ကစားစွန့်စားမှုမှဦးဆောင်သောညဏ် session ကိုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်: "Hmm, စက်ရုပ်ဒါအေးမြများမှာ, ဒိုင်နိုဆောအေးမြများမှာ, ဒါကြောင့်, ခဏစောင့်ပါဦး, ဘယ်လိုလဲ …"ဟေ့ Presto - သင်စက်ရုပ်ဒိုင်နိုဆောအပြင်းအထန် post-Apocalyptic ဂြိုဟ်ပေါ်မှာမုဆိုးနေတဲ့ဂိမ်း. ဒါဟာအဆင်းလှသော်လည်းကြည့်, မတူညီတိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးရှာဖွေရေးနှင့်ရှင်သန်မှုရောစပ်. Killzone ျနှင့်တွေ့ဆုံ? သေချာ yeah, ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ?
နောက်ဆုံးဂါးဒီးယန်း (PS4 ကို)
အဆိုပါနောက်ဆုံးဂါးဒီးယန်းများအတွက် Fumito Ueda ပြန်. ဓါတ်ပုံ: Sony က Computer ကို Entertainment က
ထို့နောက်သို့ရောက်လာသော - ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအစဉ်အဆက်ဒဏ္ဍာရီ PlayStation ခေါင်းစဉ်ကတော့ Colossus ၏ ICO နှင့်အရိပ်မှ Fumito Ueda ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတက်ကိုမြင်လျှင်အပေါ်အပ် ထို E3 တင်ဆက်မှု. ကျနော်တို့အခြားလေထုမျှော်လင့်နေ, ennui-မောင်းနှင်စွန့်စားမှု, ဤအချိန်လူငယ်တစ်ဦးလူကလေးအောက်ပါနှင့်သူ၏ … ဧရာမငှက်-fox အရာ, သူတို့တစ်တွေပြိုကျမြို့မှလွတ်မြောက်ရန်ရှာအံ့သောငှါအဖြစ်. ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ဖို့အဆင်သင့် Get.
အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky (PS4 ကို)
တစ်ဦးကနက်ရှိုင်း-ပန်းရောင်အနာဂတ် ... အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky. ဓါတ်ပုံ: မင်္ဂလာပါအားကစားပြိုင်ပွဲ
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမျိုးဆက် ငါတို့အလိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘယ်တော့မှအနာဂတ်မှာဖြစ်ပါသည် - ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် ပို. ပို. ရတဲ့နေတယ့်. ဒီတော့ hoverboards နှင့်ပျံကားသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုစွန့်ပစ်နှင့်အစားအဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky စိတ်ကူးယဉ်စတင်ရန်: အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့နက်ရှိုင်း-ပန်းရောင်နှင့်သတ္တဝါများနှင့်အာကာသယာဉ်နှင့်ပြည့်စုံစိမ်းပြာရောင်သကြားလုံးကမ္ဘာနှင့်ပြည့်စုံတစ်ကျယ်ပြန့်အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေစွန့်စားမှု. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှောငျ့ရှကျဂြိုဟ်အစဉ်အဆက်ကပိုရှုပ်ထွေးနေသောနှင့်ရာသီဥတု-ရိုက်နှက်ပုံရသည်တဲ့အခါအဲဒီအချိန်တုန်းက, ဒါကြောင့်အနာဂတ်မှာ၏ဤတောက်ပသောရူပါရုံကိုဤမျှလောက်များစွာသော enraptured ထားပြီးနည်းနည်းအံ့သြစရာင်.
လူ5(PS3, PS4 ကို)
တစ်ဦးအစွန်းရောက်အကြိုက်ဆုံး၏ပြန်သွား - Persona 5. ဓါတ်ပုံ: Atlus
မကြာခဏရိုးရာဂျပန်အခန်းကဏ္ဍ-ကစားဂိမ်းတစ်ခုပေါင်းစပ်အဖြစ်ဖော်ပြ (JRPG) နှင့် Pokemon, မူရင်းအတွက် RPG Adventures ၏ Megami Tensei series ကိုမှပယ်ပတ်ချာလည်ကတည်းက Persona စီးရီးတစ်ခုအစွန်းရောက်ထိခိုက်ခဲ့ 1996. အထက်တန်းကျောင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းဤပုံပြင်များ, လူသတ်မှု, ချစ်ကြည်ရေးနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အတတ်ပါဝါ daft မကြာခဏ idiosyncratic ဖြစ်ကြပြီး (တစ်ဦးကခုန်ကစားပွဲအရစ်ကျရှိခဲ့), ဒါပေမဲ့သူတို့ကြွယ်ဝစွာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့် Persona နေ5ဂီတမွေးထုတ်ရဲ့စီးရီးမှတက်အသက်ရှင်ဖို့ကတိတော်များ, ပန်ကာတ္ထုများနှင့်အများအပြား Crush အပေါ် တစ်ဦး ovoid Teddy ဝံကဲ့သို့ဝတ်ဆင် creepy dudes.
လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် (မက်, PC ကွန်ပျူတာ)
ကတုန်လှုပ်ချောက်ချား, Lo-Fi, ခွောကျတတျသော ... ပုံမှန်. ဓါတ်ပုံ: lunar Software များ
ဒါကြောင့်စွန့်ပစ်အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် ပတ်သက်. ကဘာလဲ? ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, ပွတ်တိုက်ဂိမ်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်လန် Soma ဝေးလံခေါင်သီရေအောက်သုတေသနအဆောက်အအပေါ်အစုံနဲ့ 2016 နောက်ဆုံးတော့ပုံမှန်၏လွှတ်ပေးရန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးစွန့်ပစ်လအခြေစိုက်စခန်းအပေါ်သတ်မှတ်ထားတစ်ဦးရှိအေးမြသောထိတ်လန့်စွန့်စားမှု. လေး-လူတစ်ဦးကိုဗြိတိန်စတူဒီယို Lunar ဆော့ဝဲ၏လုပျငနျး, လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသုံးပြုမှုကို "perma သေခြင်း" စက်ပြင်, သငျသညျအဘယ်သူမျှမကနျြးမာရေးကဒ်သို့မဟုတ်ဘဝတွေကိုရရာနည်းလမ်းများ, သငျသညျမှောင်မိုက်နယ်နိမိတ်စူးစမ်းအဖြစ်, ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ. အလွန်တစ်ခုကတုန်လှုပ်ချောက်ချား, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစွန့်စားမှုအဖြစ် reimagined နိမ့်ဘတ်ဂျက် 1980 သိပ္ပံဝတ္ထုရုပ်ရှင်.
Scalebound (Xbox One မှာ)
တစ်ဦးလူသတ်သမားတေးသံနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်နဂါး ... Scalebound. ဓါတ်ပုံ: Microsoft က
Kamiya, နားကြပ်, နဂါး. တစ်စုံတစ်ဦးကအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့ E3 မှာစင်ပေါ်မှာလာကြပါပြီနိုင်, ဤသုံးပါးစကားလုံးများကိုဆိုပါတယ်ကျနော်တို့ရောင်းချချင်ပါတယ်, ကိုယ့်လို. သင်ပိုမိုအသေးစိတ်မလိုအပ်ခဲ့လျှင်, Hideki Kamiya မာရျနတျမေလ Cry နောက်ကွယ်ကဖန်တီးမှုပါရမီဖြစ်ပါသည်, Bayonetta နှင့် Viewtiful ဂျိုးနှင့် Scalebound သည်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စီမံကိန်း, Final Fantasy ရဲ့ခေတ်မီပြင်ဆင်ခြင်းတူသောရူပကဘယ်လိုရန်ရထားသင့်နဂါးနှင့်အတူဖြတ်ကျော်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရိုးအလိုက်စွန့်စားမှု, မိမိအနားကြပ်ပေါ်ဂီတကိုနားထောင်နေစဉ်မိကျောင်းတိုက်သူတစ်ဦးသူရဲကောင်း featuring. နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီအချို့သောခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လည်စည်း-in ကို Apple ကဂီတနှငျ့အတူမဖြစ်သကဲ့သို့ကထွက်ပြေးသွားတဲ့ hit ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
Tacoma (Linux ကို, မက်, PC ကွန်ပျူတာ, Xbox One မှာ)
Tacoma 2016 ရဲ့ breakout hit ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
အကျဉ်းချုပ်ကို: သွားကြောင်းမူလစာမျက်နှာ အာကာသထဲမှာ. အဖြစ်မှန်: ဖြစ်နိုင်ပါသေးအာကာသအတွင်းနေအိမ် Gone. သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်? Tacoma တူညီသောအဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်, Fullbright, သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထွက်ပြေးသွားတဲ့အောင်မြင်မှုပြီးနောက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ကျောထောက်နောက်ခံနှင့်အတူ. ဆွဲငင်အား Portal ကိုတွေ့ဆုံတွေ့ဆုံစဉ်းစားပါ, uh, သွားကြောင်းမူလစာမျက်နှာ – နှင့်တိတ်ဆိတ်အဖြစ်, ဒီတစ်ခုကဲ့သို့အရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး Indie ပုံပြင်များအခုဂိမ်းထဲမှာ Big အရာများမှာ, ဒီ breakout အောင်မြင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
နဂါးကြောင်း, ကင်ဆာ (မက်, Ouya, PC ကွန်ပျူတာ)
တစ်ဦးကထိထိမိမိအတွေ့အကြုံကို ... ဒါကနဂါး, ကင်ဆာ. ဓါတ်ပုံ: ရိုင်ယန်အစိမ်းရောင်
ဒါဟာထူးဆန်းပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ကင်ဆာမှကလေးတစ်ဦးဆုံးရှုံးသွား၏ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုနှင့်အတူအပေးအယူတစ်ခုဗီဒီယိုဂိမ်းမျှော်လင့်. သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ရိုင်ယန်အစိမ်းရောင်သည်သူ၏သေးငယ်တဲ့အသင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်နေသည်တစ်ဦးထိထိမိမိဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါပျော်ရွှင်မှုနှင့်သားတော်ယောလရဲ့အသက်တာ၏ရုန်းကန်မှုများနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သင်တို့ကြာကြောင်းတိတ်ဆိတ်အတွေ့အကြုံကို. စီးပွားပျက်ကပ်ရှာပုံတော်နှင့်အမှန်တကယ်နေရောင်နဲ့တူဂိမ်းကလူကိုသူတို့ရုန်းကန်နေချစ်ရသူနားလည်ကူညီနိုင်လျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤလုပ်နိုင်တဲ့, လွန်း. ဒါဟာအစလုံးဝလှပသောကြည့်, ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရောင်များကိုတစ်ဦးပြိုကွဲအနား jumble, လာမှောင်မိုက်မှာအမွှပျော့အလင်းရောင်နှင့်အရိပ်.
တွမ် Clancy ၏ The ဌာနခွဲ (PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို, Xbox One မှာ)
တွမ် Clancy ၏ The ဌာနခွဲ ဓါတ်ပုံ: Ubisoft
တစ်ဦးကသေစေနိုင်သောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါဒါသဘာဝကျကျဘာမြို့လိုအပ်ချက်များကိုလူတိုင်းရိုက်ကူးမျိုးများကအမိန့် restore လုပ်ဖို့ spec-ops သူရဲတစ်ဦးအက်ကွဲကစားသမားဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက် hit ဖြစ်ပါတယ်. အိုကေ, သောလမ်းထဲကကြံစည်မှုင်, ဒီနောက်ဆုံးပေါ်တွမ် Clancy ဂိမ်း-'em-Up ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသသင်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှင့်အတူကုန်သွယ်နိုင်သောအခြားအ player ကိုအသင်းများအားဖြင့်စည်ပင်တစ် persistent အွန်လိုင်းကမ္ဘာမှာတစ်ဦး Co-op အခန်းကဏ္ဍ-ကစားမဟာဗျူဟာသေနတ်သမားအစုံရဲ့ဖြစ်ပါသည်. Destiny တခုတခုအပေါ်မှာမြို့ပြ survivalist ယူကဲ့သို့ရလဒ်ရူပ, ဆာဗာနည်းပညာဝန်ကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်လျှင်, ဒီကြှနျုပျတို့ရှိသမြှကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရတယ်စစ်တပ်ကသေနတ်သမားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်.
Uncharted 4: တစ်ဦးကသူခိုးရဲ့အဆုံး (PS4 ကို)
Epic ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပြောပြ ... Uncharted 4. ဓါတ်ပုံ: Sony က Computer ကို Entertainment က
အဆိုပါ Uncharted series များက၎င်း၏ဝေဖန်ထားခြင်းရှိပါတယ်သော်လည်း, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဆိုးခွေးတသမတ်တည်းမော်ကွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းပြောပြ၏စည်းကမ်းချက်များ၌စာအိတ်တွန်းထားပါတယ်, နှင့်ဤစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးပရောဖက်နာသန် Drake စွန့်စားမှုရူပကြောင်းအမွေကိုဆက်လက်သတ်မှတ်ထား. ဒါဟာဂန္ "တစျခုနောက်ဆုံးအလုပ်" ဇာတ်လမ်းရဲ့: Drake လက်ထပ်နှင့်အငြိမ်းစားဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါမူကား, မိမိအပူတပြင်းအစ်ကိုတစ်ကျယ်ပြန့်ပင်လယ်ဓားပြကံဇာတာ၏ပုံပြင်များနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းဟာတိရစ်ဆာနျသို့ပြန်ဆွဲထုတ်နေသည်. ကြီးမား Set-အပိုင်းပိုင်းကိုမျှော်လင့်, sassy wisecracks နှင့်အမှန်တကယ်စိတ်ခံစားမှု.
ပျက်ပြယ် (PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို, Xbox One မှာ)
heart-အရည်ပျော် ... မာတင် Sahlin ရဲ့ပျက်ပြယ်. ဓါတ်ပုံ: အီလက်ထရောနစ်အနုပညာ
ကျနော်တို့ Yarny နဲ့မေတ္တာမှာပိုနေသလားဆိုတာကိုပြောပြရန်ခက်ခဲဒါဟာင်, ပျက်ပြယ်မယ့်လက်မှုပညာ mascot, သို့မဟုတ်သူ၏ဖန်ဆင်းရှင်, မာတင် Sahlin, အဘယ်သူသည်အကြောင်းကိုသူ၏စိတ်နှလုံးသွန်းလောင်းရန် LA ကမှာကျင်းပတဲ့ E3 ကွန်ဖရပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှာစင်ပေါ်မှာ လာ. , မယုံနိုင်လောက်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတခရီး. အဆိုပါချစ်စရာပလက်ဖောင်းဂိမ်းဆွီဒင်၏ Sahlin ရဲ့ဇာတိမြေအပေါ်အခြေခံပြီးတောစူးစမ်းဖို့သင့်တဖြည်းဖြည်းပျက်ပြယ်ကြိုး-ခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီးသင်ရှိပါတယ်. ဒါဟာမေတ္တာအကြောင်းဖွင့်, သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်, မိမိလက်အာရုံကြောကနေခါအဖြစ်. နှလုံးသားများအရည်ပျော်မှု. ဒီစျေးကွက်၏အနာဂတ်သည်ဆိုပါက, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်.
အဆိုပါဝုဒ်မှလမ်း (PC ကွန်ပျူတာ)
အဆိုပါဝုဒ်မှလမ်း ဓါတ်ပုံ: အန်တိုနီတန်
ပိုသရုပ်ပြထက်အခုအချိန်မှာအနည်းငယ်သာအဖြစ်တည်ဆဲ, ဒီအမြင်အာရုံကဗြာဆနျတဲ့သမင်၏ Adventures အကြောင်းကိုဂိမ်းနှင့်မှတ်သားသိနိုင်သစ်တောအတွက်သူမ၏ဒရယ်ငယ်၌များစွာသောအကျိုးစီးပွားပြီးသားလည်းမရှိ. 16 နှစ်အရွယ်ဝိဉာဉ်အန်တိုနီတန်၏လုပျငနျး, အယူအဆနှင့်ကြည့်အဝေးဝိညာဉ်တော်နှင့်မင်းသမီး Mononoke တူသောစတူဒီယို Ghibli ဂန္အားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေကြတယ်, အဆိုပါအဆင့်မြင့် Unreal သုံးပြီးအပြန်အလှန်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပြန်ဆို4အင်ဂျင်ကို. တစ်ဦးက 2016 ဖြန့်ချိအနည်းငယ်အကောင်းမြင်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလံဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်စီမံကိန်းကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်.
ကျနော်တို့မင်္ဂလာအနည်းငယ် (PC ကွန်ပျူတာ)
အဆိုပါ retro-အနာဂတ်ဆီသို့ပြန်သွားရန် ... ကျနော်တို့မင်္ဂလာအနည်းငယ်. ဓါတ်ပုံ: မလှူအားကစားပြိုင်ပွဲ
တစ်ဦး drugged ထွက်အတွက်လီယံနှင့်ရှင်သန်မှုတစ်ခုဂိမ်း "အဖြစ်ယင်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထား, 1964 ခုနှစ်တွင် dystopian အင်္ဂလိပ်မွို့ ", ကျနော်တို့မင်္ဂလာအနည်းငယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအတွေးအခေါ်များအပေါ်ရေတိုသည်မဟုတ်. BioShock Infinite ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်နဲ့ Stanley Kubrick အားဖြင့် reimagined လိုပဲ, သင်အတည်ပြုပေးရန်ပေါ်လာရကြမည်ရှိရာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ retrofuturistic ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့သငျသညျကိုထည့်လေ့မရှိ, တစ်လိုက်တယ်ပြိုလဲလူ့အဖွဲ့အစည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်. ဒါဟာအစမှာ "ရှင်သန်မှု roguelike" ရဲ့, အဘယ်သူမျှမ respawns သို့မဟုတ်အချက်များမှတပါးရှိပါတယ်ပေးသောနည်းလမ်းများ: သငျသညျသေလျှင်, သင်တစ်ဦးအသစ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့မွို့၌နောက်တဖန်မစတင်ရန်ရှိသည်.
သကျသခေံ (iOS ကို, PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို)
သကျသခေံ ဓါတ်ပုံ: Sony က Computer ကို Entertainment က
ကျနော်တို့ကျစ်မှယောနသန်သည်ကိုမှုတ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဘို့အနှစ်ငံ့လင့်လျက်င့်, မကြာခဏခေတ်သစ် Indie မြင်ကွင်းတစ်ခု kickstarting နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုသော Xbox Live ပလက်ဖောင်း. လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်းပေါ် set, အရာဝတ္ထု Oblique သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပဟေဠိတစ်ခုစီးရီးဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျသှားပါအတိုင်းကျွန်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ unpicking. ဒါဟာ Jorge Luis Borg ပုံပြင်အဖြစ် reimagined အဆိုပါ PC ကိုဂန္ Myst နဲ့တူရဲ့.
XCOM2(Linux ကို, မက်, PC ကွန်ပျူတာ)
XCOM2 ဓါတ်ပုံ: 2K သည်အားကစားပြိုင်ပွဲ
အစုံ 20 အဆိုပါပြင်းထန်စွာချီးကျူးအလှည့်-based မဟာဗျူဟာ sim ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း, XCOM2တပါးကျူးကျော်မှုရန်ကျဆင်းသွားကြောင်းတစ်ခုကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရာအရပ်ကိုကြာ. အခုတော့တစ်ဦးခုခံလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, အဆိုပါ XCOM အဖွဲ့စစ်သားအမျိုးအစားများနှင့်အထူးတစ်အသစ်တစ်စုံရှိပါတယ်, မစ်ရှင်တစ်ပြောက်ကျားစစ်ခံစားအပေါ်တာတွေနဲ့. နောက်ထပ်, ပတ်ဝန်းကျင်မှာယခုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတင်းမာနေဖို့အံ့သြစရာများနှင့်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း, နည်းဗျူဟာပျော်စရာ.
Yooka-Laylee (Linux ကို, မက်, PC ကွန်ပျူတာ, PS4 ကို, Wii U, Xbox One မှာ)
Yooka-Laylee ဓါတ်ပုံ: Playtonic
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝါရင့်ရှားပါးန်ထမ်းတစ်ဦးအုပ်စုတစ်စုဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုကို set up, Playtonic, နှင့် Banjo Kazooie မှဝိညာဏနောက်ဆက်တွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲအကြောင်းကိုအစုံ, ချက်ချင်းနေရာတိုင်း N64 လွမ်းဆွတ်၏ပဌနာဖြေဆိုခြင်း. ဒီသင့်လျော်စွာတောက်ပ and Play ပလက်ဖောင်းစွန့်စားမှု၏ဗဟိုမှာ Co-op ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးပုတ်သင်ညိုနှင့်လင်းနို့ထက်ဝံနှင့်ငှက်များမှာ, အဆိုပါဟာသပေမယ်, setting ကိုနှင့်ဇာတ်လမ်းဟာသူတို့ရဲ့မူလအစအတွက်တွေကမှားစရာရှိပါတယ်.
37044	2 အပိုဒ်, ယဉ်ကျေးမှုကို, အင်္ဂါရပ်များ, ဂိမ်းယဉ်ကျေးမှု, အားကစားပြိုင်ပွဲ, Indie ဂိမ်းများ, ကိတ် Grey က, ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart, PC ကွန်ပျူတာ, Play Station က, က Playstation 4, နည်းပညာ, Xbox ဂိမ်း, Xbox One မှာ
← Google Glass ကို 2.0: ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံတွေပေါ်ထွက်လာ 10 အကောင်းဆုံးကိုခရီးသွားလာ apps များ၏ →